Mootummaa Bilxiginnaa garee Afaan Oromoo dubbatan keessatti wal mormiin dhalachuu dhagahaa jirra. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMootummaa Bilxiginnaa garee Afaan Oromoo dubbatan keessatti wal mormiin dhalachuu dhagahaa jirra.
Mootummaa Bilxiginnaa garee Afaan Oromoo dubbatan keessatti wal mormiin dhalachuu dhagahaa jirra.
BB$: FURGUGGEE TORBAANI.
Duulaa Oromummaa dhabamsiisuu mootummaa Itoophiyaatiin Oromoo irratti baname, shira maqaa Haaroomsa Tuulamaa jedhuun deemaa jiru, karooraa bilxiginnaan Amantii fi kutaan Oromoo qooduuf baafattee deemaa jirtu qiqindeefanne jirra. Hordofaa.
Mootummaa Bilxiginnaa garee Afaan Oromoo dubbatan keessatti wal mormiin dhalachuu dhagahaa jirra. Akkanatti itti fufuu hin dandeenyu, keessa deebinee laallachuu qabna warri jedhu xixxiixaa jiraachuu dhageenya. Mormiin Qeerroon jalqabe guyyuma tokkotti mooraa diinaatti shororkaa naquu argineerra. Qeerroon jabeessitee mudduu qabda. Waa qabanii biraa deebi´uun kana booda hin jirtu. Kan nu galaafate waa qabnee kaanee dhumate jennee biraa deebi´uu dha. Boolla takkatti lama hin kufan.
OMN: በቄሮ የታዘዘው የትራንስፖርት ዕቀባና በአንዳንድ የንግድ ተቋማት ላይ የተጠራው አድማ
Uggura Geejjibaa fi qoqqobii diinagdee guyyaa 2ffaa
Uggurri geejjibaa Fi qoqqobbiin diinagdee dhaabbatawwan filatamanirratti waammame guyyaa 2ffaadhaaf itti fufee oolera.
KMN:- Hagaya 04/2020
Uggurri geejjibaa Fi qoqqobbiin diinagdee dhaabbatawwan filatamanirratti waammame guyyaa 2ffaadhaaf itti fufee oolera. Guutummaa oromiyaatti Sirna nafxanyaa Abiyyi Ahmad irratti Kan labsame labsiin diinagdee mootummaa hunkuteessuf Qeerrodhaan waammamee ture guyyaa tokkoffaan kaleessa haala boonsaa ta’een kan eegale Yoo ta’u, Har’as guyyaa lammaffaaf itti fufuudhaan Oromiyaa iddoowwan hedduu keessatti guutumaan guututti geejjibni ugguramee oolera.
Sirni Nafxanyaa Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa ibsa gama komishinara Jeneraalaa Poolisii oromiyaatin kenneen wanti hundi too’annoo keenya jala oolera jechuudhaan wanta ummanni keenya ijaan argaa fi raawwachaa oole fooddaa TV isaanitiin bahanii saalfii tokko malee ummata sobanii jiru.
Hogganaan hospitaala Eekkaa Kotabee dhimma Obbo Dajanee Xaafaan mana murtiitti waamaman